Volavolan-dalàna Vaovao Mangataka Ny Hibahanana Ny WhatsApp Sy Google Tsy Ho An’ireo Rosiana Manampahefana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Novambra 2015 1:30 GMT
Ho an'i Solovyov, maro ireo Rosiana manampahefana “amin'izao fotoana izao no mampiasa ireo rindrambaiko (toy ireo milina fikarohana ao amin'ny aterineto sy ireo fampiasa fandefasana hafatra) ary ireo fitaovana fifandraisana (toy ny kazarana finday sasany) izay ahafahan'ireo sampam-pitsikilovana vahiny miditra mora foana amin'ny tsiambaratelo sy torohay ofisialy,” hoy ny tatitry ny masoivohom-baovao TASS.
Sosokevitra ao anatin'ilay volavolan-dalàna ny hanitsiana ilay lalàna Rosiana “Momba ny raharaham-bahoaka ao anatin'ny Federasiona Rosiana,” voalazan'ny Andininy faha-17 izay mamaritra ireo asa/fihetsika voaràra ho an'ny mpiasam-panjakana iray. Tolokevitr'i Solovyov ny hanampiana fandraràna iray ho an'ny sasantsasany amin'ireo rindrambaiko sy teknolojia fifandraisana, na dia tsy faritan'ilay volavola aza hoe hihatra fotsiny amin'ny asa mifandray amin'ny resaka serasera ilay fandraràna, na hatramin'ny resaka manokan'ireo manampahefana.
Tsy manome lisitra ahitàna ireo rindrambaiko voafaritra manokana fehezin'ilay lalàna ilay andalan-teny, fa manosoka hevitra hoe didim-panjakana hafa avy amin'ny Filoha Rosiana no hamaritra ny lisitra tahaka izany. Ilay mpanao lalàna izy tenany mihitsy no nilaza tamin'ny masoivohom-baovao RBC fa ny fanovàna avy aminy dia mikendry ireo milina Tandrefana Google sy Yahoo! natao ho fikarohana, hatramin'ilay WhatsApp fampiasa ifandefasana hafatra .
Nohazavain'i Solovyov fa ny hetsika nataony dia natosiky ny fitomboana tsy mitsahatr'ireo fanafihana ety anaty tontolon'ny cyber manjo ny rafitra fampitàm-baovao ampiasain'ireo Rosiana manampahefana, ary nolazainy fa ny fandraràna ireo fampiasa sy fitaovam-pifandraisana sasany dia mety “hanampy amin'ny fampivoarana betsaka ny fiarovana ny tsiambaratelo sy ny torohay ofisialy.”
Leonid Levin, lehiben'ny kaomisiona ao amin'ny Domà mpanjakana momba ny politikan'ny fampitambaovao, nilaza tamin'ny masoivohom-baovao RBC fa tsy hitany izay ilàna karazana fanitsiana tahaka izany amin'ilay lalàna. “Misy lalàna iray momba ny asam-panjakàna, manana ny torolàlana natao ho azy samirery ireo sampandraharaha manokana. Tsy hitako izay tokony ho antom-pisian'ny fepetra fanampiny eto,” hoy ny voalaza fa nambaran'i Levin.
Ny 16 Novambra, Aleksandr Ageyev, Rosiana mpanao lalàna niantso ny sampandraharana Rosiana Mpitsikilo (FSB) hijery izay ahafahana maneritery ny fidiran'ny Rosiana mpampiasa aterineto amin'ilay “Telegram” fampiasa ifandefasana hafatra, tamin'ny fiampangàna azy io ho nampiasain'ny vondrona Fanjakàna Islamika handrindràna fanafihana. Hevitra tsy niraisan'i Nikolai Nikiforov, minisitra rosiana misahana ny fifandraisandavitra, ary nilazàny fa tsy tokony hanakana ny “Telegram” na ireo fampiasa ifandefasana hafatra ireo manampahefana, fa tokony hamantatra sy hanenjika ireo izay manao fihetsika tsy araka ny lalàna.”
Ny Jolay 2015, Ivan Tavrin, filohan'ny Megafon, Rosiana mpanome tolotra fifandraisandavitra, dia nitaky fepetra henjankenjana kokoa araka ny lalàna ho ampiharina amin'ireo fandefasana hafatra WhatsApp, Viber, sy Skype. Ny Jona 2015, Alexandr Zharov, lehiben'ny Roscomnadzor, ilay toy ny alika mpiambina ny media Rosiana, dia nanosoka hevitra hoe tokony hamokatra tolotra fandefasana hafatra ho azy manokana i Rosia, tao anatin'ny hetsika iray hanoloana ireo vokatra ara-tsakafo sy tolotra avy any ivelany amin'ireo vokatra avy eo an-toerana ary hanamafy ny fiarovana ny torohay nasionaly.